Football Khabar » बार्सिलोनाको रक्षापंक्तिलाई चोट र प्रतिबन्धले तनाव : डर्टमुन्डलाई अवसर !
बार्सिलोनाको रक्षापंक्तिलाई चोट र प्रतिबन्धले तनाव : डर्टमुन्डलाई अवसर !
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा समूह चरणको पाँचौं तथा दोस्रो लेगमा आज स्पेनिस बार्सिलोना र जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डको रोमाञ्चक खेल हुँदैछ । यसअघि डर्टमुन्डको घरेलु मैदानमा भएको पहिलो लेग ०–० का सकिएको थियो ।
आज बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नाउमा दुवै टोली स्पष्ट जित निकालेर अन्तिम १६ मा स्थान पक्का गर्ने योजनामा छन् । बार्सिलोनालाई अन्तिम १६ मा जान मात्रै १ अंक आवश्यक छ । त्यसका लागि आज उसले बराबरी मात्रै गरे पनि पुग्छ । तर, डर्टमुन्डले भने आज बार्सिलोनालाई जितेर पनि अन्तिम खेलबाट १ अंक आवश्यक पर्न सक्छ ।
बार्सिलोनालाई चोट र प्रतिबन्धले तनाव !
आज आफ्नो घरमा युवा खेलाडीले भरिएको डर्टमुन्डविरुद्ध उत्रिँदा बार्सिलोनाको रक्षापंक्तिलाई ठूलो चुनौती हुनेछ । किनभने, आज क्याम्प नोउमा घरेलु टोलीसँग रक्षापंक्ति सम्हाल्ने प्रमुख खेलाडी हुनेछैनन् ।
अनुभवी सेन्टर डिफेन्डर जेरार्ड पिके प्रतिबन्धका कारण यस खेलको टोलीमै छैनन् । उनी नहुँदा टिममाथि स्वभाविक दबाब बढ्ने नै छ । त्यस्तै, नियमित लेफ्ट ब्याक जोर्डी अल्बा चोटका कारण आजको खेलमा छैनन् । अल्बा नहुँदा बार्सिलोनाको रक्षापंक्तिलाई चुनौती बढ्ने पक्का छ । त्यस्तै, आज राइट ब्याकमा नेल्सन समेडो पनि चोटकै कारण टोलीमा छैनन् । उनको चोट पनि बार्सिलोनालाई आज महँगो पर्न सक्छ ।
त्यत्ति मात्रै हैन, अर्का डिफेन्डर क्लेमेट लेङलेट पनि पूर्ण रूपमा फिट छैनन् । तर, उनलाई टोलीमा भने राखिएको छ । र, प्रशिक्षक अर्नेस्टो भालभर्डेमाथि आज उनलाई प्रयोग गर्नैपर्ने दबाब छ ।
केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नेक्रममा काल्फ इन्जुरीबाट ग्रस्त बनेका उनी ठीक भएर टोलीमा फर्किएका छन् । तर, उनी पूरा समय खेल्न फिट नरहेको भाल्भर्डे स्वयंले बताएका छन् । खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भाल्भर्डेले भने, ‘म उनलाई अझै केही दिन आराम दिन चाहन्थें । उनी १०० प्रतिशत ठकि छैनन् । तर, हामीसँग अहिले विकल्प छैन । डर्टमुन्डविरुद्ध उनको अवस्थाबारे निर्णय लिन बाँकी छ ।’
बार्सिलोनाको टोलीमा रक्षापंक्तिलाई सहयोग गर्न युवा खेलाडी जिन क्लेयर टोडिबो र रोनाल्डो अरौजो पनि उपलब्ध छन् । तर, महत्त्वपूर्ण खेलमा कम अनुभव भएका खेलाडीलाई भाल्भर्डेले प्रयोग गर्ने सम्भावना कम छ ।
दुईजना चोट, एकजना प्रतिबन्ध र एकजना पूर्ण फिट अवस्थामा नरहँदा भाल्भर्डेले डर्टमुन्डविरुद्ध कसरी टोली बनाउलान् ?
घाइते सेमेडोको अभाव टार्न हालै प्रतिबन्धबाट फुकुवा भएका सर्जी रोवेर्टेले राइट ब्याक सम्हाल्नेछन् । यता, लेफ्ट ब्यामा जुनियर फिर्फोले सम्हाल्ने पक्का छ । किनभने, विकल्पमा उनी मात्रै छन् । उनीमाथि आज अल्बाको जिम्मेवारी पूरा गनर्नुपर्ने दबाब छ ।
त्यस्तै, बार्सिलोनाको रक्षापंक्तिमा अन्य विकल्प भनेको सामुएल उम्टिटी हुन् । अघिल्लोपटक ला लिगामा राम्रो प्रदर्शन गरेका उनलाई आज सेन्टर डिफेन्डरको जिम्मा दिनेछ ।
रक्षापंक्तिबाहेक बार्सिलोनामा अन्य पोजिसनमा खेल्ने सबै प्रमुख खेलाडी उपलब्ध छन् । गोलपोस्टमा मार्क आन्द्रे टर स्टेगेन हुनेछन् भने आक्रमण लाइनमा कप्तान लिओनल मेस्सी, लुइस स्वारेज, एन्टोनी ग्रीजम्यन, उसामान डेबेले र अन्सु फाती उपलब्ध छन् ।
बार्सिलोना युरोपियन च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत आफ्नो घरमा भएका पछिल्ला ३४ खेलमा अपराजित छ । के आज डर्टमुन्डविरुद्ध उसले यो अपराजित यात्रा कायमै राख्न सक्ला ?
प्रकाशित मिति ११ मंसिर २०७६, बुधबार १७:१६